घोराही उपमहानगरपालिका १९ का नेपाली कांगे्रसका वडा अध्यक्षका उम्मेद्धार ज्ञान बहादुर रायमाझी संगको कुराकानी ।। « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
घोराही उपमहानगरपालिका १९ का नेपाली कांगे्रसका वडा अध्यक्षका उम्मेद्धार ज्ञान बहादुर रायमाझी संगको कुराकानी ।।
६ असार २०७४, मंगलवार ०२:३२ मा प्रकाशित
१ तपाईको राजनितिक यात्राको सुरुवात कहाँबाट र कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो ?
सानै देखिको रुचिको कारणले गर्दा राजनितिक यात्रामा प्रबेश गरेको हो । २०५१ सालको मध्यावधी चुनाब हुँदा मेरो बुवा प्रेम बहादुर रायमाझी वडा अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका माननिय सासंद बलदेब शर्मा मजगौंयाको साथ र प्रेरणाले राजनितिक यात्राको सुरुवात गरेको हुँ । २०६६/०६७ सालदेखि सैघाको तरुनदलको अध्यक्ष को रुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो र १३ औं महाअधिबेशनबाट ईकाई सभापति भएर काम गरे र अहिले पनि निरन्तर काम गर्दैछु ।
२ तपाई किन राजनितिको बाटो लाई अङ्गाल्नु भयो ?
सैघा गाबिस एकदमै पिछडिएको क्षेत्र हो त्यसैले त्यस क्षेत्रको बिकासको लागि काम गर्ने अबसर यहि स्थानिय चुनाबले मलाई दियो वडा अध्यक्षका रुपमा उठाउनु भयो र केहि गर्छु भन्ने बिश्वासका साथ मैले यो राजनितिको यात्रा तय गरेको छु ।
३ तपाई १९ वडा अध्यक्षको उम्मेद्धार पाई सकेपछि कस्ता खालका गुरुयोजना अगाडि ल्याउनु भएको छ ?
सर्बप्रथम मैले गाउँको बिकास निर्माणका लागि शिक्षा, सडक, खानेपानि, बिधुत, बाटो, सञ्चार बिकास निर्माणका लागि पहल गर्ने काम गर्नेछु । बेरोजगार युवालाई रोजगारको व्यबस्था मिलाउन पहल गर्नेछु ।
४ सैघामा यो भन्दा पहिले एमाले र दोस्रो संबिधान सभाको चुनाबमा माओबादीको आधार ईलाका हो । तपाईलाई के लाग्छ जित तपाईको हात पार्ला ?
यो स्थानिय चुनाब एउटा लडाई हो । मलाई बिश्वास गर्ने मतदाताले मलाई भोट गरि जिताउनु हुने छ बिश्वस्त छु ।
५ तपाई यो भन्दा पहिले राजनितिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको थिएन नि रु अहिले पनि पार्टीको मान्छे भनेर चिन्दैनन् भर्खर देखि हो यो भन्दा पहिले के गर्नु हुन्थ्यो ?
म सर्बसाधारण नै थिए र समाजमा बिभिन्न तरिकाले आफ्नो भुमिका निर्बाहमा काम गर्न रुची थियो । मलाई कमै मान्छे ले चिने पनि बिस्तारै आफ्नो पहिचान बनाउछु र सबैका सामु चिनिन्छु भन्ने अठोटका साथ पार्टीमा लागेको छु । पक्कै अब नचिनेको व्यतिmले चिन्नु हुनेछ, ढुक्क छु ।
६ तपाईको पाटीको जिल्लामा गुटबन्दी छ रु तपाईको पार्टी अनि कार्यकर्ताले कति मात्रामा सहयोग पाउनु भएको छ ?
पार्टीमा गुटबन्दी नहुने कुरै भएन तर यो घर भित्रको कुरा हो कसरी अगाडि बढ्ने र सहमतीय प्रयासहरु घर भित्रै छलफल गरेर अगाडि बढ्छौ, मलाई कुनै आपत्ति छैन । मलाई पार्टी, नेता कार्यकर्ता सबैको साथ सहयोग पाएको छु ।
७ अहिलेको अबस्थामा सैघा एकदमै पिछडिएको क्षेत्र हो यदि तपाई जित्नु भयो भने के गर्नु हुन्छ भाबि योजना कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ?
केहि प्राप्तीका लागि राजनितिक गदैछु । भोलिका दिनहरुमा बिकास निर्माण संगै समाजको पहिलो आबश्यकता एम्बुलेन्सको व्यबस्था, रोजगारी र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने पर्यत्न गर्दैछु ।
८ सैघामा तपाईको कुन पार्टी संग प्रतिस्पर्दा गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिलेको अवस्थामा एकदमै प्रतिस्पर्दा गर्न मैदानमा उत्रिएको छु त्यसैले सैघामा बिभिन्न पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । त्यसैले बिशेष गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओबादि संग बिशेष प्रतिस्पर्दा गर्दैछु ।
अन्त्यमा , बिशेष गरि सैघालि मिडिया गु्रपलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु र मलाई १९ नम्बर वडा अध्यक्षमा रुख चिन्हमा मतदान गरी जिताउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।